Himalaya Dainik » विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो !
विवाहपछि महिलालाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो !
विवाह हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण फैसला हो, जुन सोच विचार गरेर मात्र लिनु पर्दछ। धेरै जसो महिला विवाहपछि नयाँ परिवेशमा आफूलाई लैजाने गर्दछन्।
यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्। कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ।
यी कुरा सबै महिलामा लागु नहुनसक्छ तर बिभिन्न अध्ययनबाट धेरैजसो महिलालाई यी ५ कुरामा पछुतो हुने गर्दछ।
सेल्फ टाइम : विवाहपछि महिलाले पतिसँग सँगै परिवारलाई पनि समय दिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरुमाथि यति धेरै जिम्मेवारी आउने गर्दछ की उनीहरु आफूलाई समय दिन पाउँदैनन्। जसबाट दिक्क भएर उनीहरुमा विवाह गरेकोमा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
पर्सनल स्पेन : हर कोहीको जीवनमा पर्सनल स्पेन आवश्यक हुने गर्दछ। उनीहरुलाई यस्तो जीवनका लागि समयनै मिल्दैन्। जब उनीहरुलाई आफ्नो चीज गर्ने मौका नै मिल्दैन् तब उनीहरुलाई विवाह गरेमा पछुतो हुने गर्दछ।
आफैलाई परिवर्तन : विवाहपछि महिलालाई धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले हरेक स्थितीमा आफूलाई फिट राख्ने प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुरालाई लिएर कहिलेकाही दिक्क हुने हुँदा उनीहरु विवाह गरेकोमा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
पूर्व पति वा प्रेमसँग तुलना : कहिलेकाही विवाहपछि महिलाका अघि विभिन्न समस्या आउने गर्दछन्, तब उनीहरुलाई महशुस हुने गर्दछन् की यो भन्दा बरु पूर्व प्रेम वा पति भएको भए राम्रो हुने थियो होला । यस्तो अवस्थामा महिला आफ्नो विवाहको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
बच्चा बनाउन हतार : विवाह गर्ने वित्तिकै युवतीमा बच्चा जन्माउने दवाब आउन सुरु हुन्छ। अरु यसका लागि युवती तयार नहोस्, तर कुनै न कुनै बहानामा उसले यो कुरा सुन्नु पर्दछ। कतिपय महिलालाइ हरेक दिन बच्चाको कुरा सुन्दा उनीहरुलाई विवाह गरेकोमा पछुतो हुने गर्दछ। एजेन्सी
के अन्ततः कोभिड-१९ को खोप तयार भएकै हो ?
केही समयमै डिलिट गरिएको प्रधानमन्त्रीको ट्विट बन्यो भाइरल
एक्कासी ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ !
यी ७ अवस्थामा मेवा खादै नखानुस्, गर्नसक्छ ठुलो हानी
बिहे गर्ने मुडमा रेखा थापा
ऐश्वर्या जस्तै देखिने इरानी मोडलको ‘बोल्ड’ लुक्स [फोटो फिचर]
साथीले पैसा चोरेको ‘आरोप’ लगाएपछि २३ बर्षिया युवतीले लिइन् आफ्नै ‘ज्यान’
स्कुटर दुर्घटनामा घाइते १९ बर्षिया प्रिया बुढाथोकीको उपचारको क्रममा मृत्यु
मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी श्रीमान श्रीमतीले गुमाए ज्यान
पत्रकार ऋषि धमलालाई कोरोना संक्रमण
उजाडियो पौडेल परिवारको घर, दुई जवान छोराको शव उठाउँदा नरुने कोहि भएन
पोखरामा कोरोना संक्रमणबाट एक महिने शिशुसहित चारको मृत्यु
पुनरावलोकन निवेदन खारेजः सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने